चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ ? यसो भन्छन् चलचित्रकर्मी « Lokpath
२०७७, २३ चैत्र सोमवार १३:००
चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ ? यसो भन्छन् चलचित्रकर्मी
प्रकाशित मिति : २०७७, २३ चैत्र सोमवार १३:००
काठमाडौं । वरिष्ठ कलाकार नीर शाहले औद्योगिक चरित्र हालिस गर्न नसकेका कारण चलचित्र क्षेत्र उद्योगको रुपमा स्थापीत हुन नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजको १३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै वरिष्ठ कलाकार शाहले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीति नियम बनाएपनि औद्योगिक चरित्र हासिल नभएसम्म उद्योगको रुपमा स्थापीत हुन नसक्ने बताए ।
यस्तै चलचित्र क्षेत्र आफै राष्ट्रिय स्तरको बन्न नसकेको पनि शाहले बताए । जुन भाषालाई मात्र लिएर दशकौं देखि सिनेमा बनेका छन त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय भइसक्नुपर्ने तर त्यसो हुन नसक्नुको मुख्य कारण सबैले जान्ने र माया गर्ने भाषामा चलचित्रलाई प्रस्तुत गर्न नसक्नु नै रहेको बताए । जबसम्म देश भरका सम्पूर्ण भाषा, संस्कृति, संस्कारलाई सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडी बढाउन सकिन्न तबसम्म चलचित्र उद्योगले राष्ट्रिय स्वरुप हासिल गर्न नसक्ने पनि वरिष्ठ कलाकार शाहले बताए ।
निर्देशक समाजका उपाध्यक्ष राजेन्द्र उप्रेतीले सरकारले कोरोना खोप सबै नागरिकलाई दिनुपर्ने र भिडमा जाँदा कोरोना सर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने बताए । यस्तै यसअघि राम्रो चलचित्र बनाई राम्रो आम्दानी गर्दै आएका निर्माताहरुले नै पहिलो तत्परता देखाएर चलचित्र प्रदर्शनि गर्नुपर्ने बताए । निर्देशक समाजका अर्का उपाध्यक्ष राजु अधिकारीले पनि दर्शकलाई हलमा जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी सुरक्षाको आभास दिलाउनुपर्ने बताए ।
निर्देशक समाजका सचिव जनकदीप बज्राचार्यले सीनेमा दर्शक, सरकार र सबैको सकारात्मक सहयोग भएमा थलिएको सिनेमा क्षेत्र चलायमान बनाउन सकिने बताए । यस्तै निर्देशक, निर्माता नरेश पौडेलले सरकारले पाँच वर्ष सम्मका लागि चलचित्र क्षेत्रका सबै व्यवसायलाई सम्पूर्ण रुपले कर छुट गर्नुपर्ने बताए ।
कलाकार दिनेश डिसीले सबैभन्दा पहिला गास, बास र कपासको समस्या समाधान नभईकन चलचित्र क्षेत्र चलायमान बन्न नसक्ने बताए । जनजीवन समान्य बन्दै गएको अवस्थामा चलचित्रकर्मीहरु सबैले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिई चलचित्र प्रदर्शनका लागि तयार हुनुपर्ने बताए । यस्तै पहिलोपटक चलचित्र कसले चलाउने भन्ने अन्योल भएकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताए ।
कलाकार दिपाश्री निरौलाले सामाजिक दुरी कायम गर्दै चलचित्र हेर्नका लागि आम दर्शकलाई आह्वान गर्नुपर्ने बताइन् ।